Tani dhab ahaan waxay noqon kartaa muuqaalka ugu dambeeya ee iPhone 8 | Wararka IPhone
Waxaa jira dhowr bilood oo xan ah oo kahadlaya dhinaca waxa noqon doona terminaalka weyn ee xiga ee ay Apple ka bilaabayso suuqa. The iPhone 8 ama 'daabacaad gaar ah' iPhone Sannad-guuradii tobnaad, soo-saarista moodalkii ugu horreeyay ayaa keenaya rajo weyn oo ka dhex jirta kuwa raacsan shirkadda weyn ee Californian, iyadoo daadad kasta oo yar uu yahay arrinta falanqaynta iyo Crore nuxurka adduunka oo dhan. Laakiin maanta ma aha xadi yar ama xan yar.
Muuqaaladan ayaa soo dusay Reddit Waxay ku soo beegmayaan wakhti, haddii aan fiiro gaar ah u yeelanno taariikhda sanadaha kale, daadadka ugu horreeya ee taas oo markaa ku dambaynaysa inay noqoto badeecada Tim Cook uu xayaysiiyo on stage maalinta soo bandhigida rasmiga ah. Si kale haddii loo dhigo: ma jiro wax la xaqiijiyay ilaa maalinta Apple ay wax ku ool ka dhigeyso, laakiin waxaa jira boqolkiiba suuro galnimo in sawirrada ka imanaya Aasiya wixii hadda ka dambeeya ay leeyihiin heer sare oo run ah.
Sawiradan cusubi waxay na tusayaan nashqad horeyba nooga bartay bilooyinkan ka hor, oo leh shaashad looxyadu waxay ka ifayaan uguyaraan- maqnaashahooda iyo halka aad ka arki karto xarig yar oo dhexe oo ku yaal qeybta sare ee kamaradda iyo dareemayaasha kala duwan. Dhanka dambe, isbeddelka jihada kamaradaha ayaa umuuqda mid la xaqiijiyay, iyo waliba iskuxidhka tooshka ee udhaxeeya labada muraayadaha. Iyo, maya, ma jiro raad raaca akhristaha faraha ee suurtogalka ah ee ku yaal aagga dambe.
Sida sawirka labaad, waad arki kartaa waxa gadaasha dambe ee iPhone 7s iyo 7s Plus noqon doonaan, oo leh naqshad isku mid ah taas oo aan ka helno moodooyinka hadda suuqa ku jira iyo in, la ag dhigay iPhone 8 la mooday, waxay umuuqdaan inay xaqiijinayaan in cabirkiisu noqon karo qiyaastii 5,8 inji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Daadadka cusub waxay soo jeedinayaan in tani ay noqon doonto muuqaalka dhabta ah ee iPhone 8
Waa maxay isticmaalka lagu daray la looxyada?
Waxay u qalantaa nasiib 8-da.
Dheeraadku macno ma samaynayo, waa sidee lacagta lagu helo
Waxaa jira wax aan ku habboonayn sawirka, sida ku cad qorshooyinka iyo xanta, iPhone 8 wuxuu lahaan doonaa laba kamarad iyo dareemayaal qoto dheer (infrared iyo laser) iyo Iris iyo qalabka wax lagu baaro, laakiin sawirka waxaad kaliya u aragtaa booska loogu talagalay hal kamarad
Uga jawaab hebichii
Dabcan, iyo afhayeenka hufan iyo kamaradda sidoo kale ...
Albaabka kaa xir.
Ku jawaab Marcoan
Maxaa jira si loo akhriyo…